सहकारी Archives ~ Page3of 14 ~ Banking Khabar
बौद्ध ग्रामिण सहकारीद्धारा कर्जा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न
बैंकिङ खबर । सुर्खेतको वीरन्द्रनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको बौद्ध ग्रामिण बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले फिल्ड संचालन तथा कर्जा व्यवस्थापन तालिम सम्पन्न भएको छ । संस्थाका विभिन्न शाखामा रहेका १८ जना फिल्ड कर्मचारीहरुकोको सहभागीता रहेको तालिममा फिल्ड संचालन, कर्जा वितरण, विश्लेषण र व्यवस्थापनका विषयमा तालिम दिइएको हो । कर्मचारीहरुको कार्यक्षमतालाई थप उर्जाशल र सिर्जानात्मक गराउनका लागि
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले व्यवस्थापन शूल्क मात्रै लिने, सेवा शूल्क हटायो
बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सेवा शूल्क नलिने भएको छ । बैंकले सदस्य संघरसंस्थाहरुलाई कर्जा लगानी गर्दा एक प्रतिशत सेवा शूल्क लिँदै आएको थियो । नयाँ मौद्रिक नीतिले सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरेपछि बैंकले सेवा शूल्क नलिने निर्णय गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकत बद्रीकुमार गुरागाईँले जानकारी दिए । अब सहकारी बैंकले कर्जा लगानीका समयमा
सहकारीमा दोहोरो सदस्यता हटाउन निर्देशन, २०७७ सम्मको अल्टिमेटम
बैंकिङ खबर । सहकारीमा रहेको दोहोरो सदस्यता हटाउन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारी ऐनले कुनै व्यक्ति एक स्थानीय तहको एकै प्रकृतिका एकभन्दा बढी संस्थाको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरेसँगै विभागले दोहोरो सदस्यता हटाउनका निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको हो । के छ ऐनमा व्यवस्था ? २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि लागू भएको सहकारी ऐन—२०७४
के.एम. योगिता, बैंकिङ खबर । सहकारी तथा वित्तीय संस्था पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायराभित्र परेको छ । सहकारीमार्फत अर्बको कारोबार हुने र वित्तीय अपराधहरु पनि बढिरहेको अवस्थामा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने ती क्षेत्रलाई पनि सरकारले अख्तियारको दायरमा ल्याएको हो । हाल सम्म वाणिज्य बैंकहरु मात्र अख्तियारको दायरामा राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अख्तियार
बैंकिङ खबर । प्रभु मेनेजमेन्टले सहकारी संस्थाहरुको व्यवसायिक सफलताका लागि सहकारी संस्थाका सदस्यहरु सहित आम नेपालीलाई नगद रहित कारोवार गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यका साथ हालै पोखरामा विद्युतीय वित्तिय सेवाका बारे विशेष कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । सहकारी संस्थाहरुमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगद्वारा सेवाहरुको विस्तार गरी वित्तिय सेवामा सदस्यहरुको पहुँच बृद्धिगर्ने उद्येश्यले सहकारीहरुको भेला आयोजना गरी
मेचि सहकारीले यसरी बदल्यो दमकका सर्वसाधारणको दैनिकी (रिपोर्ट)
बैंकिङ खबर । झापा दमकका बलभद्र चुडालको दैनिकी आजकल फेरिएको छ । विगतमा वैदेशिक राजगारमा विभीन्न खाडीमुलुक चहारेका चुडाल हिजो आज विहानै अटो रिक्सा झिक्छन् र दिनभर ग्राहकलाई रिझाएर साझँमा पुग्छन् झापा दमक ६ को मेचि सहकारी संस्था । करीब ६ महिनाअघि मेचि सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋणको दैनिक किस्ता तिर्ने मात्र हैन घरको सबै खर्चको
बैंकिङ खबर । सर्वसाधारणको ३३ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगेर फरार काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिलमा रहेको शाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक रोशन श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठले जाहेरवालाहरुबाट प्राप्त गरी साँवा रकम सेमत फिर्ता नगरी उक्त संस्था नै बन्द गरी ठगी गरेको ब्यूरोको भनाई छ । उक्त
सहकारीमा नियमन नहुँदा रोकिएनन् ठगीका घटनाहरु
बैंकिङ खबर । सर्वसाधारणको ३३ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ ठगेर फरार काठमाडौं महानगरपालिका–७ चाबहिलमा रहेको शाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक रोशन श्रेष्ठलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले पक्राउ गरेको छ । श्रेष्ठले जाहेरवालाहरुबाट प्राप्त गरी साँवा रकम सेमत फिर्ता नगरी उक्त संस्था नै बन्द गरी ठगी गरेको ब्यूरोको भनाई छ ।
बैंकिङ खबर । मेची सहकारी संस्था दमकले विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक सामाग्रि हस्तान्तरण गरेको छ । संस्थाले शैक्षिक अविभावकत्व ग्रहण गरेका विद्यार्थीहरुलाई यो शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक सामाग्रि हस्तान्तरण गरेको हो । संस्थाले गएको शैक्षिक सत्र देखी आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका दश विद्यालयका एक – एक विद्यार्थीको शैक्षिक अविभावकत्व ग्रहण गरेको थियो । जसमा संस्थाले
टिकुलीगढ सहकारीमा आवद्ध कृषकलाई उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन
बैंकिङ खबर । तिलोत्तमा–१३ र १४ टिकुलीगढ रुपन्देहीका तीन सय ४३ दुग्ध उत्पादक कृषकहरुले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. ५ अन्र्तगतको पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बुटवलबाट उत्पादनको आधारमा प्रति लिटर एक रुपैयाँ ९२ पैसाका दरले उत्पादनमा आधारित कृषि प्रोत्साहन पाएका छन् । श्री टिकुलीगढ दुग्ध उत्पादक तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडमा
बैंकिङ खबर । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा निक्षेपजति सहकारीमा थुप्रिन थालेका छन् । बैंकमा स्रोत नखुलेको रकम जम्मा गर्न नमिल्ने भएका कारण त्यस्ता रकमहरु सहकारीमा जम्मा हुने गरेका छन् । यसले गर्दा एकातिर बैंकहरुा निक्षेप अभाव भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कालो धन लुकाउन सहज भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन
बैंकिङ खबर । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा निक्षेपजति सहकारीमा थुप्रिन थालेका छन् । बैंकमा स्रोत नखुलेको रकम जम्मा गर्न नमिल्ने भएका कारण त्यस्ता रकमहरु सहकारीमा जम्मा हुने गरेका छन् । यसले गर्दा एकातिर बैंकहरुा निक्षेप अभाव भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ कालो धन लुकाउन सहज भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण
बागलुङमा धौलागिरी स्तरीय बृहत सहकारी सम्मेलन हुने
बैंकिङ खबर । बागलुङ जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. बागलुङको आयोजनामा बागलुङ बजारमा धौलागिरी स्तरीय बृहत सहकारी सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । धौलागिरी क्षेत्रलाई सहकारीको तिर्थस्थलको रुपमा विकास गर्ने तथा सहकारीको दर्शन, मुल्य र मान्यतामा आधारित व्यवसायिक सहकारीहरुको विकास र सु सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ यहि मिति २०७६ जेठ २६ र २७
राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा सहकारी अनुगमन गरिने
बैंकिङ खबर । नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन गरिने भएको छ । विगतमा सहकारीको अनुगमनमा कडाइ नगरिँदा सहकारी नियन्त्रणबाहिर गएको हुँदा सहकारी विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अनुगमनको पाटो अगाडि बढाउन केन्द्रीय बैंकलाई पत्र लेख्ने सहकारी विभागका रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताएका छन् । नयाँ सहकारी नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सहकारी अनुगमनको कार्यलाई कडाइका
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने ६ उपायहरु
बैंकिङ खबर । सहकारी एउटा यस्तो व्यवसाय हो जहाँ संयुक्त रुपमा सदस्यहरुद्वारा आर्थिक लगानी गरी व्यवसायवाट प्राप्त मुनाफा नियामनुसार वितरण गरिन्छ । एउटा अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वायत्त, स्वतन्त्र र उद्यमशिल व्यवसायीक संगठन नै सहकारी हो । सहकारी एउटा यस्तो उद्यम पनि हो जसले सदस्यलाई सेवा प्रदान गदर्छ । सहकारी समुदायमा बसोवास गर्ने मानिसहरुको अभियान हो ।